Waraaqaha loogu talagalay tattoos, soo hel noocyada ugu wanaagsan | Tattoo
Waraaqaha loogu talagalay tattoos, soo hel noocyada ugu fiican
Markaad dooranayso naqshad ay ku jirto waraaqaha waayo, xaraashka ku lug lahaanshaha waa fikrad aad u wanaagsan in laga soo qaato waxyaabo dhowr ah. Marar badan waxay kuxirantahay waxa aan qori doonno si aan u go'aansano nooca font ee nagu habboon.
Waayo, Maqaalkan waxaan ku diyaarinay noocyo fara badan si aad u go'aansato midka aad ugu jeceshahayweliba, loo qaybiyaa iyadoo loo eegayo sida ugu wanaagsan ee ay ugu habboonaan karaan hal eray ama weedh.
1 Qaab-qoraaleedka qoraalka, kun farriin oo loogu talagalay hal farriin
2 Noocyada kelmadaha keliga ah
2.3 Dhaqan ahaan
2.5 Iyada oo sawiro gudaha ah
3 Fonteyaal weedh
3.1 Gacanta ayaa ku qoran
3.5 Xarfaha kale
Qaab-qoraaleedka qoraalka, kun farriin oo loogu talagalay hal farriin
Aadanaha, sida ugu habboon mid ka mid ah astaamahiisa ugu waaweyn, hal-abuurnimo, wuxuu allifay astaamaha astaamaha illaa uu bartay qorista. Iyada oo la alifay madbacadda daabacaadda noocyada xarafku way bateen, oo ikhtiraaca kumbuyuutarradu intaba way ka sii badan yihiin.
Qoraalkan kuma koobnaan doonno inaan raacno kala-jaadnimada caadiga ah ee qaab-qorista, inta badan waxaa lagu go'aamiyaa iyadoo loo eegayo xilligii la ikhtiraacay (tusaale ahaan, Gothic-ka, oo ku dayana qoritaanka qarniyadii dhexe, ayaa ka mid ahaa kuwii ugu horreeyay ee soo muuqday) , laakiin waxaan sameyn doonaa laba qaybood. Labadan qaybood waxay raadsadaan raaxo markay tahay laguu waxyooday nashqadaada soo socota hadey ka kooban tahay eray ama weedh dhan (In kasta oo, sida had iyo jeer, kala qaybsanaantu ay kaliya isku dayayso inay ku caawiso, waad ka boodi kartaa iyaga si kasta oo aad rabto, ka dib oo dhan waa sawirkaaga!)
Noocyada kelmadaha keliga ah
Noocyada hoos ku qoran ee aan hoos ku soo bandhigno ayaa ku habboon in loo isticmaalo xarfaha tattoo oo ka kooban hal eray ama laba ama saddex ugu badnaan. Khadadkooda qaro weyn iyo mararka qaarkood la qurxiyo micnaheedu waa in astaantani marwalba leedahay cabbir weyn oo ka kooban ereyo kooban si loo fududeeyo akhriska.
Waxay ku habboon yihiin in lagu qaado meelo waaweyn, sida gacmaha, lugaha, dhabarka ama laabta. Maskaxda ku hay in farshaxanka tattoo uu ku weydiin doono inaad doorato boos weyn maxaa yeelay, waqti ka dib, tattoo-gu wuu sii fidayaa xarfahana way isu imaan karaan, taas oo aan qurux badnayn.
Mid ka mid ah noocyada ugu caansan ee loo yaqaan 'Gothic', oo, sidaan soo sheegnay, doonaya inuu ku daydo qaabka qoraallada qarniyadii dhexe. Garaacisyadeeda murugsan oo madow lagu qurxiyay waxay ka dhigayaan nooc muuqaal aad u qurux badan (oo waliba ay adag tahay in la qariyo mustaqbalka).
Qaab aad u cajaa'ib badan oo aad sidoo kale isku dari kartid midabbo kale (casaan, buluug, jaalle ...) waa qaab-qoraalkan oo ku dayanaya qaabka goob-goobeedka. Si la mid ah tii soo jireenka ahayd, in kasta oo iyada oo aan gebi ahaanba la wada ahayn, xarfaha ay la socon karaan naqshad sida ku cad qoraalkan.
Xaqiiqdii markaan ka fikirno waraaqaha loogu talagalay tattoos waxa ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca waa nooca noocan ah. Xoogaa ka fiican sidii kuwii hore, waxay maamushaa inay u muuqato labadaba qaabkeeda iyo taabashada midabka waxay ku siin kartaa xarfaha.
Tattoo oo u ekeysiinaya fekerka ayaa sidoo kale ku habboon dhiirrigelinta hal-ereyga tattoo oo u baahan inuu noqdo mid aad u riwaayado ah. Midab madow iyo caddaan ama midabba leh, oo lagu qurxiyay sawirro ama xarfaha kaliya, waa qaab aad u awood badan oo reer magaal ah.
Iyada oo sawiro gudaha ah
Ugu dambeyntiina, qaab gebi ahaanba ilaalinaya diiwaanada dhagaxa, oo ku baaqaya naqshad aad u weyn, oo leh heeso waaweyn: Waxay ku saabsan tahay qurxinta gudaha xarfaha oo leh sawirka aad ugu jeceshahay (laakiin sida ku cad waxa ay tiraahdo, dabcan). Naqshadeynta ugu dambeysa, sifiican ayaa loo qabtay, waa daanka-daadinta.
Noocyada xarfaha in ka badan hal eray waxay leeyihiin astaamo ay kaga fiican yihiin kuwii ka horreeyay. Xaaladaha badankood waxay ku daydaan naqshadeynta aadanaha, taas oo ka dhigaysa iyaga kuwo ku habboon naqshadaha weedh aad rabto inaad ku akhrido si nadiif ah oo fudud.
Meesha lagu dhejin karo astaantan waxay ku xirnaan doontaa inta ay tahay. Hadday tahay weedh aad u gaaban, goobo yaryar sida curcurka, dhudhunka, faraha, xusulka, jilibka, ama qoorta ayaa kufiican. Jumladaha dhaadheer, ama naqshadaha waaweyn, waxaa lagugula talinayaa inaad doorato meel ballaaran sida dhinac, biceps, xabadka ...
Gacanta ayaa ku qoran
Iyada oo la adeegsanayo far qoraal ah oo ku dayanaya qaabka gacanta lagu qoro, waxaad ku guuleysan doontaa naqshad aad u dabiici ah oo caqli badan. Intaas waxaa sii dheer, waxaa jira boqollaal xarfo oo laga soo qaadan karo dhiirrigelinta, maadaama aan dhammaanteen leenahay xarfo kala duwan. Fikrad fiican in la helo tattoo qof ahaaneed, dhab ahaantii, waa in lagu dhiirrigeliyaa qoraalka gacanta ee qof aad jeceshahay.
Hadda wax walba waxaa lagu qoraa kumbuyuutar, xulashada farta qoraalka kudayanta qoraalka waa ikhtiyaar nostalgic ah, qaasatan kuwa naga bartay qorista iyaga. Dooro font sidan oo kale ah naqshad soo celinaysa xusuus ama u metelaysa qayb buug ka mid ah, tusaale ahaan.
Waraaqda caadiga ah ee alwaaxa ayaa sidoo kale leh midkeeda waxayna noqon kartaa xulasho wanaagsan oo loogu talagalay tattoo. Naqshad aad u fudud, laga yaabee inaysan ahayn tan ugu habboon in la muujiyo fikradaha weyn ama runta., laakiin waxay u egtahay mid u fiican tattoos farta, tusaale ahaan.
Calligraphy wuxuu ku iftiimaa sida ugufiican marka aad xarfaha ku xirto kuwa kale jumlad. Raadi farshaxan tattoo gaar ah si aad u hesho kan ugu quruxda badan, xitaa waad ku qurxin kartaa waxyaabo kale sida ubax.
Ugu dambeyntii, Haddii aad dooranaysid xarfaha taatuuga xarfaha kale, waxaa ugu wanaagsan inaad doorato far cad, akhrin kara oo xarrago leh (iyo farshaxan yaqaanka oo garanaya waxa la sameeyo, gaar ahaan xarfaha alifbeetada bariga) oo aan ka qaadaynin naqshadeynta.
Waxaan rajeyneynaa in maqaalkan ku saabsan xaraashka xaraashka ay kaa caawisay inaad doorato qaabka ugu habboon ee loogu talagalay tattoo-kaaga xiga. Noo soo sheeg waxa aad u malaynayso faallooyinka!
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos leh xarfo » Waraaqaha loogu talagalay tattoos, soo hel noocyada ugu fiican
Tattoos Adhijirka Jarmalka ah
Tattoo Gorilla, soo ogow macnaha naqshaddan xoogga badan